इन्फोटेकमा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो अफर ल्याएका छौं : पराजुली - Living with ICT
Home / Featured / इन्फोटेकमा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो अफर ल्याएका छौं : पराजुली
इन्फोटेकमा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो अफर ल्याएका छौं : पराजुली
Shiva Basnet Jan 26, 2017	2 Comments
अध्यक्ष, सुबिसु केबलनेट प्रालि
क्यान महासंघका इभेन्टहरूमा निरन्तर ४ वर्षदेखि शीर्ष प्रायोजन गरिरहनुभएको छ । यो सहयात्रा कहिलेसम्म जारी रहला ?
नेपालको सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धनमा क्यान महासंघले खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रशंसा हुने गरेको छ । क्यान महासंघले स्थापनाकालदेखि गर्दै आएका कामबाट हामी निकै उत्साहित छौं । सुबिसु केबलनेट प्रालि नेपालको अग्रणी इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवाप्रदायक भएको नाताले क्यानका हरेक प्रयासमा हातेमालो गरेका हौं । यो यात्रा सदैव निरन्तर रहनेछ । हामी शीर्ष प्रायोजक मात्रै भएर होइन, उहाँहरुले अगाडि सार्नुभएको ई–नेपालको अवधारणा मूर्त रुप दिन पनि सँगसँगै यात्रा गर्न चाहन्छौं ।
इन्फोटेकमा के ल्याउनुभएको छ विशेष ?
शीर्ष प्रायोजक भएकाले सुबिसुले के ल्याउँदै छ भन्ने उत्सुकता पक्कै होला । सन् २००० देखि केबल टिभीबाट सेवा सुरु गरेको सुबिसुले हाल सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाहरु घरेलु प्रयोजनदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि देशको ६६ जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको छ र निकट भविष्यमै ७५ जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । इन्फोटेकमा हामीले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र डिजिटल टिभीलाई नै विशेष प्रदर्शनी गर्दै छौं । आगामी वैशाख १६ देखि डिजिटल टिभी अनिवार्य रुपमा लागू हुने भएकाले क्लियर टिभीलाई आकर्षक प्याकेजका साथ प्रस्तत गर्दै छौं । हामीले विशेष गरी इन्फोटेकमा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो अफर ल्याएका छौं ।
सुबिसुले क्लियर टिभी पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसको बजार कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले २ वर्षदेखि अप्टिकल फाइबरबाट चल्ने डिजिटल टिभी क्लियर टिभी पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । उपत्यकामा विस्तार गरी देशका ग्रामीण क्षेत्रसम्म यसको विस्तार गर्दै छौं । भर्खरै नुवाकोटका सबै गाविस र संखुवासभाका २५ गाविसमा यो सेवा पु¥याएका छौं । स्याटेलाइटमा नभई केबलमा ब्यान्डविथ दिएर डिजिटल टिभी दिएकाले ग्राहकले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ ।
क्यान इन्फोटेक २०१७ मा सुबिसुको नयाँ धमाका र उत्सव अफर केके छन् ?
स्वभावैले हामी शीर्ष प्रायोजक भएकाले आम अवलोकनकर्ताको विशेष आकर्षण सुबिसुको स्टलमा रहनेछन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवालाई आकर्षक अफरका साथ मेलामा प्रदर्शनी गर्नेछौं ।
Previous नेपालीलाई सुहाउँदा आकर्षक स्मार्टफोन सामसुङले ल्याएको छ : स्थापित
Next इन्टरनेट र क्लियर टिभीमा सुबिसुको यस्तो जम्बो अफर
भएर के गर्ने quality को service नभएपछि